Arkaana Iimaanaa-3ffaa Archives - Ibsaa Jireenyaa
Category: Arkaana Iimaanaa-3ffaa
September 23, 2018 Sammubani Leave a comment
Hundee iimaanaa keessaa sadaffaan kitaabban Rabbiin buusetti amanuudha. Akka lugaatti “Kitaaba” jechuun wanta galmaa’e fi barraa’edha. Akka shari’aatti immoo kitaaba jechuun Kalaama (Jecha) Rabbiin ilma namaatiif rahmataa fi qajeelcha akka ta’uuf Ergamtoota Isaa irratti buusedha. Sababa kitaaba Rabbiin irraa bu’e kanaan ilmaan namaa sa’aada (gammachuu) ganda lamaanii dhandhamu. Osoo Rabbiin kitaabban isaaniif buusu baate, silaa hundii isaanitu dukkana keessatti kufanii hafu. Rabbiin subhaanahu wa ta’aalaa kitaabban buusun akkamitti dukkana keessaa sababa Ergamtootatiin akka baase akkana jechuun ilma namaatti beeksiisa.
May 19, 2018 Sammubani Leave a comment
May 5, 2018 Sammubani 2 comments
Qur’aanni kalaama (haasawa) Rabbii, Nabiyyi Muhammad (SAW) irratti buufame fi isa dubbisuun akka ibaadatti kan ilaallamuudha.
Qur’aana keessatti yeroo baay’ee maqaa Qur’aanaa agarsiisuuf jechoonni lama irra deddebi’amanii mul’atu. Isaanis; Qur’aanaa fi Kitaaba. Lugaa Arabiffaa keessatti “Qur’aanni” hiika “dubbisuu” qaba. Kuni kan agarsiisu Qur’aanni qubeewwan walitti fiduun arrabaan dubbifamuu kan danda’amuudha. Karaa biraatin “Kitaaba” jechuun wanta galmaa’e fi barraa’edha. Read more
Wahyiin Qur’aanaa fi hadiisota sirrii Ergamaa Rabbii irraa gabaafaman akka of keessatti qabatu kaasne turre. Ergamaan Rabbii (SAW) ofirraa kaasanii waan hin dubbaneef waa’ee amanti ilaalchise wanti dubbatan, hojjatanii fi mirkaneessan wahyii Rabbiin irraa isaanitti bu’eedha. Ragaan kanaa: Read more
Qur’aanni Akkamitti Buufame?-Kutaa 1
April 21, 2018 Sammubani Leave a comment
Qur’aanni Jecha Rabbii olta’aati. Dhala namaa dukkana keessaa gara ifaatti baasuf Rabbiin (subhaanahu wa ta’aala) jecha Isaa kan ta’e Qur’aana jaarraa 14 dura Nabii Muhammad (SAW) irratti buuse. Namoonni kana ajaa’ibsifachuun Rabbiin akkamitti Nabiyyi irratti kitaaba kana buusee? Sila akka amma arginu kanatti waraqaa irratti barreesse buuse moo akkamitti buufamee? In sha Allah har’a akkaata buufama Qur’aanaa gabaabbinnaan ni ilaalla. Asii gaditti waa’ee wahyii fi buufama isaa ilaalla. Qur’aanni wahyii keessaa tokko waan ta’eef akkataa buufama isa hubachuun nama hin dhibu. Barreefama keessatti “Ergamaa Rabbii (SAW)” yommuu jedhu Nabi Muhammad (SAW) akka ta’e haa hubatamu. SAW jechuun Salallahu Aleyh Wassalam (nageenyi fi rahmanni Rabbii isarratti haa jiraatu) jechuudha. Read more